एक सातापछि उठ्यो भरतपुरको फोहोर ! »
काठमाडौँ, ११ भदौ। स्थानीयको अवरोधका कारण एक सातादेखि उठ्न नसकेको भरतपुर महानगरको फोहोर उठ्न शुरु भएको छ। फोहोर व्यवस्थितरुपमा बिसर्जन गर्ने विषयमा स्थानीय टोल सुधार समितिसँग सहमती गरी फोहोर उठाउन थालिएको हो । हाल महानगरले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ नगरवन नजिकै फोहोर बिसर्जन गर्दै आएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख ई. बिराट घिमिरेका अनुसार महानगर क्षेत्रबाट दैनिक ७० टन फोहोर सङ्कलन हुने गर्दछ । महानगरले मुख्य बजार क्षेत्रमा दैनिक फोहोर सङ्कलन गर्दै आएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा १५ दिनमा एक पटक फोहोर उठाउने घिमिरेले बताए।
ठाउँअनुसार एक दिन बिराएर, हप्तामा दुई पटक, हप्तामा एक पटक फोहोर उठाइँदै आएको छ। स्रोतमै फोहोर कम गर्न महानगर लागि परेको उनले बताए । सुइरो कार्यक्रमसँग सहकार्य गरेर प्लाष्टिक जन्य फोहोर घटाउँदै आएको छ।